Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Fitsaboana hita ho an'ny COVID-19 miaraka amin'ny fatra tokana amin'ny fanafody efa nankatoavin'ny FDA?
Fianarana miaraka izay tarihin'i Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) miaraka amin'ny Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), fiaraha-miombon'antoka amin'ny University of Melbourne sy Royal Melbourne Hospital, dia naneho fa ny fanafody anti-parasite efa misy manerantany dia mamono ilay virus ao anatin'ny 48 ora.
Na dia eo aza ny fitsapana maro momba ny klinika ankehitriny mba hitsapana ny fitsaboana azo atao, ny valiny manerantany momba ny fihanaky ny COVID-19 dia voafetra tamin'ny fanaraha-maso / fifehezana. Ivermectin, anti-parasite nankatoavin'ny FDA teo aloha izay naseho fa manana hetsika anti-viral spectrum-19 amin'ny vitro, dia mpanakanana ny viriosy mahatonga azy.
Ny fampiasana Ivermectin hiadiana amin'ny COVID-19 dia miankina amin'ny fitsapana alohan'ny klinika sy ny fizahan-toetra amin'ny klinika, miaraka amin'ny famatsiam-bola takiana maika hampandrosoana ny asa.
Tany Aostralia, fanadihadiana momba ny fiaraha-miasa notarihin'i Monash University dia navoaka tao Fikarohana antivirus, diary ara-pitsaboana naverina nodinihina https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787
Ny Monash Biomedicine Discovery Institute's Dr Kylie Wagstaff, izay nitarika ny fandinihana, nilaza ny mpahay siansa fa ny zava-mahadomelina, Ivermectin, dia nanakana ny viriosy SARS-CoV-2 nitombo tamin'ny kolontsain'ny sela tao anatin'ny 48 ora.
"Hitanay fa na dia fatra tokana aza dia mety esorina avokoa ny RNA viralin'ny 48 ora ary na dia 24 ora aza dia misy fihenana lehibe tokoa ao aminy," hoy i Dr Wagstaff.
Ivermectin dia zava-mahadomelina ankatoavin'ny FDA izay voaporofo fa mandaitra in vitro manohitra virus isan-karazany, anisan'izany ny VIH, Dengue, Influenza ary Zika virus.
Nampitandrina i Dr Wagstaff fa ny fitsapana natao tamin'ny fandinihana dia in vitro ary mila atao amin'ny olona ny fitsapana.
“Ivermectin dia be mpampiasa sy hita ho fanafody azo antoka. Tokony hojerentsika izao raha hahomby ny fatra azonao ampiasana azy amin'ny olombelona - izany no dingana manaraka, ”hoy i Dr Wagstaff.
“Amin'ny fotoana mahatonga antsika areti-mandringana manerantany ary tsy misy fitsaboana ekena, raha manana fitambarana efa misy eran'izao tontolo izao isika, dia mety hanampy ny olona haingana izany. Raha ny tena izy dia ho elaela kely vao hisy vaksinina malalaka.
Na dia tsy fantatra aza ny rafitra iverenan'ny Ivermectin amin'ny viriosy, dia azo inoana fa, miorina amin'ny fihetsika ataony amin'ny viriosy hafa, dia miasa izy io hampijanona ny virus 'hampihena' ny fahafahan'ny sela nampiantrano azy, hoy i Dr Wagstaff.
Dr Leon Caly amin'ny Hopitaly Royal Melbourne, mpahay siansa zokiolona ao amin'ny Laboratory Reference Diseases Diseases (VIDRL) ​​ao amin'ny Doherty Institute izay nanaovana ny andrana niaraka tamin'ny coronavirus mivantana, no mpanoratra voalohany tamin'ny fanadihadiana.
"Amin'ny maha virolojia virtoaly ahy izay tao anatin'ny ekipa izay nanokana sy nizara ny SARS-COV2 voalohany tany ivelan'i Sina tamin'ny volana Janoary 2020, faly aho ny amin'ny fampiasan'ny Ivermectin ho zava-mahadomelina fanoherana ny COVID-19," hoy i Dr Caly. .
Dr Wagstaff dia nanao fikarohana tamin'ny Ivermectin taloha tao amin'ny 2012 rehefa nahalala ny zava-mahadomelina sy ny antivirus nataony niaraka tamin'ny Monash Biomedicine Discovery Institute's Profesora David Jans, mpanoratra ihany koa amin'ity taratasy ity. Profesora Jans sy ny ekipany dia nandinika an'i Ivermectin nandritra ny 10 taona mahery izay manana virus hafa.
Dr Wagstaff sy ny Profesora Jans dia nanomboka nanadihady raha niasa tamin'ny virus SARS-CoV-2 raha vantany vao fantatra fa nanomboka ny areti-mandringana.
Ny fampiasana Ivermectin hiadiana amin'ny COVID-19 dia miankina amin'ny valin'ny fitsapana mialoha ny klinika sy ny fitsapana amin'ny klinika farany, miaraka amin'ny famatsiam-bola takiana maika hanohizana ny fampandrosoana ny asa, hoy i Dr Wagstaff.
Vakio ny taratasy feno ao amin'ny Fikarohana Antiviral mitondra ny lohateny hoe: Ny fanafody Ivermectin nankatoavin'ny FDA dia manakana ny famerenan'ny SARS-CoV-2 in vitro
Amin'izao fotoana izao, fanafody 40 hafa koa no karohina mba hahazoana tombony amin'ny fitsaboana COVID-19.